I-AIMP yesiqhelo. Incwadana yokufaka kunye noqwalaselo lokuqala | Iindaba zeGajethi
DKudala ndikhangela isidlali-mculo esifanelekileyo, esineenguqu ezithile, ukurekhoda, njl njl. kwaye kulula ukuyisebenzisa, nge-AIMP Classic ndicinga ukuba ndiyifumene into ebendiyifuna. I-AIMP Classic iya kukuvumela ukuba udlale zonke iintlobo zeefayile zomsindo (MP3, WAV, AIFF, CDA, Iifayile zeMOD, i-OGG kunye neWMA) kwaye yamkela uluhlu lokudlalwayo kwiifomathi ezahlukeneyo (PLC, PLA, PLC kunye neM3U).
Ngaphambi kokuba uqhubeke kufuneka ufunde i-Aimp Classic, iGreasemonkey, iTrojan.Peed.Gen kunye neHacker kwaye wazi iingxaki zokhuseleko ezinokubangelwa kukufakwa kwale software. Emva kokuyifunda, sisigqibo sakho ukufaka le nkqubo okanye hayi.
EUmdlali uza ngeelwimi ezininzi, kubandakanya iSpanish, kwaye isimahla. Ukuba awukalifaki eli candelo lenkqubo, sele uthatha ixesha.
1) Khuphela i- I-AIMP Classic 1.77.9 kusuka apha.
2) Xa unayo kwi-hard drive yakho, cofa kabini kwifayile oyikhupheleyo.
3) Iwindow iya kuvela ithi "Nceda ukhethe ulwimi" oko kukuthi "Nceda ukhethe ulwimi". Inokukuvumela ukuba ukhethe phakathi kwesiNgesi nesiRashiya okanye inokuza ngesiNgesi kuphela. Ngayiphi na imeko oku kuphela kofakelo ke khetha isiNgesi esiya kuthi kamva sibeke inkqubo ngeSpanish. Cofa ku "Kulungile" kwaye kuya kuvela le festile ilandelayo.
4) Cofa ku "Okulandelayo>" emva koko ku "Ndiyavuma" uza kufika kwiwindows elandelayo apho kuya kufuneka ujonge zonke iibhokisi, nangona kunokwenzeka ukuba zonke sele zihloliwe. Emva koko cofa ku "Okulandelayo>".
5) Kwiwindows elandelayo cofa ku "Okulandelayo>" emva koko ku- "Faka". Ukufakwa kuya kuqala. Xa ukufakwa kwe-AIMP Classic kugqityiwe, cofa ku "Vala".
6) Iimpawu ezimbini ziya kuvela kwidesktop yakho. Enye yazo "zizixhobo ze-AIMP" ezivula izixhobo ze-AIMP Classic onokuguqula ngazo iaudiyo, urekhode isandi okanye uhlele iilebhile zolwazi. Kungekudala ndiza kwenza inyathelo ngenyathelo lokufunda ukufunda ukusebenzisa yonke le misebenzi kodwa ngoku siza kugxila kwenye i-icon eyenziweyo kwidesktop yakho, ebizwa ngokuba yi "AIMP Classic".
Cofa kabini kwi icon "AIMP Classic" kwaye iwindow ethi "Khetha ulwimi" iya kuvela. Le festile iya kusivumela ukuba sibeke yonke inkqubo ngeSpanish ngoko ke nqakraza kwityolo elincinci ngasekunene kwakho kwaye ukhethe "iSpanish (ES)". Emva koko cofa "Kulungile".
7) Ngoku le nkqubo iyasibuza ukuba sifuna ukumisela inkqubo kwi "Imowudi yabasebenzisi abaninzi" okanye "Imowudi yomsebenzisi omnye". Ukuba sikhetha "iNdlela yoMsebenzisi omnye" kwaye ikhompyuter yakho isetyenziswa ngabantu abohlukeneyo baya kuthi bonke babe nezicwangciso zenkqubo efanayo. Ukuba ukhetha ukuba umntu ngamnye osebenzisa ikhompyuter yakho abe nezinto azithandayo, shiya ibhokisi "yeMowudi yabasebenzisi abaninzi" ihlolwe, leyo ihlolwe ngokungagqibekanga. Emva koko cofa ku ">>".
8) Kwiwindow elandelayo sinokukhetha ifomathi yoluhlu lwethu lokudlala. Oko kukuthi, ifomathi apho uluhlu lweengoma ezahlukeneyo esizenzayo luya kugcinwa. Inkqubo icebisa ifomathi yePLC, eyifomathi esetyenziswa yiAIMP Classic kuluhlu lwayo lokudlala (uluhlu lokudlala). Siyishiya imakishwe kwaye siyinika ">>".
9) Ngoku kubonakala enye iwindow iqhubeka nokulungisa izinto esizikhethayo. Kulo mfanekiso sinokuhlula iibhloko ezintathu.
Kwibhloko yokuqala sinokhetho olulandelayo
Khumbula imeko yangaphambili yomdlali ekuqaleni: jonga le bhokisi ukuba ufuna ukuba xa uvula isidlali siyakulandela kanye inqaku apho ubushiye khona xa uyivala okokugqibela. Umzekelo, ukuba ubumamele ingoma kwaye uvale inkqubo ngequbuliso, xa uyivula kwakhona, ingoma iya kulandela apho ubuyeke khona.
Xa usenza uluhlu lokudlala, musa ukubuza igama: Tshekisha le bhokisi ukuba awufuni kuchwetheza igama ngalo lonke ixesha usenza uluhlu lokudlala, nangona ungalibiza igama ukuba uyafuna.
Khubaza ukuphinda ukuba inye kuphela ingoma kuluhlu lokudlala: Ukuba ushiya le bhokisi ikhangelwe kwaye kumdlali wakho umamele ingoma enye kuphela, xa iphela ayizukuphindwa. Nangona kunjalo, uluhlu lokudlala olunengoma engaphezulu kwesinye luya kuphindwa.
Kwibhloko yesibini kufuneka sikhethe phakathi kolunye lweendlela ezintathu inkqubo esisinika zona:
Yenza uluhlu olutsha lokudlala: Tshekisha le bhokisi ukuba ufuna i-AIMP Classic ukwenza uluhlu lokudlala olutsha ngalo lonke ixesha usongeza iifayile zomculo kwisidlali. Ngale ndlela, inkqubo ivelisa uluhlu lwezintlu onokufikelela kuzo ngqo.
Yongeza kuluhlu lwadlalwayo lwangoku: Ukuba ujonga le bhokisi ngalo lonke ixesha usongeza iingoma ezintsha ukuzidlala, inkqubo iya kubajoyina kuludwe lokudlala olisebenzisayo.
Yongeza kuluhlu lokudlala olungagqibekanga: Olu lukhetho olungagqibekanga kwaye into eyenzayo kukuqala ukudlala umculo ngqo kuluhlu olutsha lokudlala. Uluhlu lokudlala luza kuthatha igama elithi "Okungagqibekanga" kwaye ukuba uvula elinye iqela leengoma kwakhona, olu luhlu luya kucinywa kwaye olunye uluhlu "Okungagqibekanga" luyakwenziwa ngeengoma ezintsha ngaphandle kokuba ukwazi ukufikelela kuluhlu oludlulileyo kwakhona.
Ibhloko yesithathu neyokugqibela kule festile ayifuni nkcazo ingako.
Apha ungakhetha ukuba ufuna umdlali azitshintshe ngokuzenzekelayo ukusuka kolunye uluhlu lokudlala aye kolunye ekupheleni koluhlu lokudlala. Unokwenza ukuba iphinde iphinde iphinde ifike esiphelweni kuluhlu, olu lukhetho olungagqibekanga. Okokugqibela, ukuba ujonga "Ukulinda", i-AIMP Classic iya kumisa ukudlala ekupheleni kohlu lokudlala kwaye iya kulinda ii-odolo zakho.
Kwezi bhloko zintathu ndigqibe kwelokuba ndishiye yonke into njengoko isiza ngokungagqibekanga, ukhetha ezona zilungele wena. Ngayiphi na imeko kamva sinokutshintsha zonke ezi zinto sikhetha kuzo kwinkqubo. Cofa ku ">>" kwaye masiqhubeke.
10) Sisenokukhetha ukukhetha uhlengahlengiso:
Bonisa iwindow yokubonisa: Ukuba siyishiya ihlolwe, inkqubo iya kubonisa le festile encinci ngelixa ilayisha.
Kungabonakala ngathi olu khetho alunamsebenzi, kodwa kwiikhompyuter ezineeprosesa ezicothayo kungathatha ixesha ukulayisha kwaye ushiye le bhokisi ihlolwe siyabona ukuba i-AIMP Classic iyalayisha. Ukuba khange ikhangelwe, mhlawumbi besinokucinga ukuba le nkqubo ayilayishi kwaye singayibetha i-icon amatyeli aliqela kwakhona, sibangele abadlali abaninzi ukuba bavule kwaye bazalise inkqubo ngememori ekuyo. Kungcono uyiyeke ihlolwe.
Dibanisa kwimenyu yomxholo wesikhangeli: shiya le bhokisi ikhangelwe kwaye uya kuba nakho ukufikelela kwimisebenzi eyahlukeneyo yenkqubo kwimenyu yokujonga yomhloli. Emfanekisweni ungabona ukuba ujongeka njani:
Bonisa ulwazi lwefayile yangoku xa uqala ukudlala: Ukuba uyishiya ihlolwe, inkqubo iya kubonisa ibha ephezulu kwesikrini sakho kunye nalo lonke ulwazi lwefayile edlalwayo.
Ukuba ucinga ukuba le bar inokukukhathaza, sukukhangela le bhokisi.
Nciphisa uMmandla weSaziso: Ukuba ushiya le bhokisi ikhangelwe, umdlali unokuncitshiswa kwicala lasekunene lesikrini sakho.
Ukhetho lokugqibela kule festile yi "Covers". Unokukhetha imbonakalo yomdlali wakho kwezi zine zilandelayo:
Khetha eyona uyithandayo kwaye ucofe ku ">>".
11) Sigqibezela, kufuneka sikhethe imibutho esifuna ukuyenza, oko kukuthi, into esiya kuyenza kukuxelela ikhompyuter ukuba isebenzise i-AIMP Classic xa ucofa kabini kwifayile ekhethiweyo kolu luhlu:
Njengoko ndiza kusebenzisa i-AIMP Classic njengomdlali womculo kwindalo iphela, ndicofe u "Vuselela konke" ukuze zonke iifayile zomculo zinxulunyaniswe nenkqubo. Unokumakisha ngesandla abo ubathandayo. Xa ugqibe kwelokuba ucofe ku "[OK]".
EUmdlali sele efakiwe kwaye emiselweyo ukuqala ukudlala wonke umculo owufunayo. Kukho ezinye iindlela esinokuziqwalasela kwinkqubo, kodwa siya kushiya oku kwisifundo esilandelayo apho ndiza kuchaza yonke into ngenyathelo kunye nemifanekiso emininzi. Ngamana ungonwabela lomdlali ubalaseleyo womculo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-AIMP yesiqhelo. Incwadana yokufaka kunye noqwalaselo lokuqala
Izimvo ezi-93, shiya ezakho
Molo, sele ndinayo inguqulelo engu-1.77.9 efakiweyo, ndiyayithanda inkangeleko yenguqulelo yangaphambili, enye inobuso obubini ngeentolo zayo ezihambayo, ndiyenza njani i-AIMP yam ibonakale ngoluhlobo? okanye ukuba akunjalo, ndiyifumana phi le nguqulo indala? (Andilikhumbuli inani), sele ndiyikhangele kwi-Intanethi kwaye andiyifumani, enkosi ngolwazi lwakho, uJavier ...
Uxolo Javier bendikhangela ingxelo endala kwaye andibonanga nto. Masibone ukuba omnye umntu ofunda la magqabaza uyazi apho anokukhuphela khona uhlobo lwakudala lwe-AIMP Classic, umzekelo 1.74. Amathamsanqa.
Iviniga, ndingasitshintsha njani isikhumba se-aimp? Ndikhethe enye ngexesha lofakelo kwaye ngoku andazi ukuba ndiyitshintshe phi. Ngendlela, kuba ibizwa ngokuba yinkqubo yeklasikhi ye-aimp, kukho i-aimp engeyona yakudala okanye into enjalo. Enkosi kwangaphambili ngokuqinisekileyo uyaphendula.
Molo uFederico ukutshintsha ulusu lwe-aimp classic kufuneka uvule umdlali, emva koko unike ukhetho kwaye wakube ucofe ku "Ujongano". Ngasekunene kwindawo ebizwa ngokuba yi "Covers found:» uyakufumana ezinye izikhumba ze-aimp. Gcina ukhumbula ukuba ukongeza ekutshintsheni ulusu unokutshintsha umbala wolusu ngalunye kunye nokukhetha ngasekunene. Ukubulisa.
Molo… khuphela i-Aimp kwaye ndiyayithanda, kodwa ndinengxaki ngezixhobo ze-Aimp. Xa ndiyisebenzisa ukurekhoda kuwo nawuphi na umthombo (kwimeko yam ikhadi lesandi), xa ndiyidlala, icinezelwe kakhulu. Kuya kufuneka ndikuxelele ukuba ndimtsha koku kwaye inqanaba lam lekhompyuter lisisiseko. Ndingavuya kakhulu xa uthe wandinceda.
Molo Max, ndicinga ukuba ngo "ucinezelwe kakhulu" uthetha ukuba inqanaba lokudlulisa liphantsi. Ukuba akunjalo, ndixelele, kodwa ukuba le yingxaki, yenza oku kulandelayo.
Xa uvula i-AIMP Classic usebenzisa kwaye ukurekhoda isandi, khetha ngasekunene kwescreen sakho, kwindawo "yeFomathi", ikhowudi, umzekelo i-MP3 Encoder. Ke emazantsi nqakraza kwi «…» ukunyenyisa umgangatho. Ngoku ungalonyusa izinga lokutshintshela kwi-192 elingaphezulu kwexabiso elamkelekileyo. Cofa ku "Ok" kwaye uzame ukurekhoda ukubona ukuba kanjani. Ukubulisa.
Mhlobo, ndiyavuya ukukwazi. Ungandixelela ukuba ndingamisela njani isilinganisi somculo othile? Ukusuka eVenezuela
Hola José Ndicinga ukuba uthetha ntoni lukhetho oluqhelekileyo lokubeka umdlali elungiselelwe ukuva "iDwala", "Ikhonsathi", "iDisco", njl. Inkqubo ayizisi olu khetho ngokungagqibekanga, into ekufuneka uyenzile kukuhlengahlengisa ukulingana ngendlela othanda ngayo kwaye emva koko ugcine ngegama ukuze kamva uyisebenzise ngokwesimbo somculo osivayo.
Ndifumana umbono wokuba sele ndiyazi ukuba iphi isilinganisi kodwa ukuba akunjalo, jonga kwiqhosha elincinci elithi «EQ» kwaye livela ngaphezulu nje kweqhosha le- «PLAYLIST». Emva kokucofa kweli qhosha, i-16-bar bar equalizer iya kuvula ukuba ukwazi ukuziqhelanisa nokuthanda kwakho, ineziphumo ezininzi ezinje nge "SPEED" (isantya sokudlala), "CHORUS" (chorus), "ECHO" (echo), "REVERB» (Reverberations) kunye «FLANGER» (ukujikeleza isinyithi).
Xa wenze konke uhlengahlengiso lixesha lokugcina ubumbeko lwesilinganisi, ukuze wenze oko ucofe ku «LIB» kunye «Gcina», unike igama kwaye uya kuba nokulingana kugcinwe.
Ndiyathemba iyanceda, imibuliso.
Enkosi ngale khosi, iluncedo kakhulu, ndizimisele ukumamela izikhululo zikanomathotholo ngale nkqubo, uqhagamshelo lwam lwenziwa ngummeli, xa ndicofa umdlalo, uphawula ukuba uyadibana kodwa soze udibane, ungandinceda ukumisela Unxibelelwano lwe-Intanethi ngokuchanekileyo kwi-AIMP.
Sawubona uOscar, bebesele bendibuza ngendlela yokumamela izikhululo nge-Aimp kwaye inyani kukuba amaxesha ndizamile, khange ndikwazi ukunxibelelana nasiphi na isikhululo sikanomathotholo. Iphepha elisemthethweni lenkqubo likwisiRashiya kwaye akunakwenzeka ukuba ufumane into oza kuyibona ukuba ungayenza njani. Ukuba ndibethe isitshixo, ndiza kukwazisa.
Ngaba ungawufaka umculo ovakala kwividiyo yomculo kwi-aimp2? ukuba kunjalo, umntu angandixelela ukuba kutheni, nokuba ndizama kangakanani, ayisoze ibhale nantoni na.
Ndineengxaki zokuba ndikwazi ukudibanisa iingoma .. lomdlali unolu khetho esebenzisa ishifti + u kodwa ndiyenza ngoluhlobo ngengoma endifuna ukuba iyidlale emva kwale idlalayo kodwa akukho nto isebenzayo… ukuba umntu uyayazi Nceda undazise enkosi ...
Phendula u luis manuel
ULuis ubhalele mna phantsi kwaye xa ndinokwazi ukuyijonga.
Molo Zoliz, njengoko usenokuba wafunda ekuqaleni kwenqaku, ngoku ndinayo Yijonge Uvalelwe yedwa de icacise ukuba inentsholongwane okanye hayi. Xa ndenza njalo ndiza kuphanda ukuba ungayenza njani into oyicelayo. Konke okugqibelele.
Molo kumandi ukudibana nawe
Ewe le yingxaki, ndingabona njani ukuba iingoma endizimameleyo kwi-aimp zibonisiwe kwi-msn yam, oko kukuthi, ziyavela njenge player player
Ndinombuzo malunga nendlela yokusebenzisa isishicileli sesandi? Ngaba ndingayisebenzisa ukwenza iithowuni zokukhala? Ndicela undibhalele kwi-imeyile yam kwaye undixelele endimele ndikwenze. Enkosi
Phendula u Harold
Ndine-AIMP 2.10 njenge-oreproducer kwaye kulungile kodwa ndingathanda ukwazi ukumamela unomathotholo kunye ne-aimp, UKUBA KUKHO U-NTUTORIA WENKOSI
Molo, ndifuna ukwazi indlela yokujonga umculo weklasikhi ye-aimp
kwi msn ??? Enkosi
hayi dj sitsho
Molweni nonke, ndingu-Izy Kwaye ukusukela oko kwaqala kwe-AIMP bendisele ndinayo kakade. Okwangoku ... andifuni ukwenza ipropaganda okanye nantoni na efana nokucacisa 😐
Ukuze ukwazi ukubona kakuhle oko umameleyo kwi-AIMP kufuneka ukhuphele i-amip_winamp.zip. Nje ukuba sikhutshelwe siyayivula kwaye senze i-AMIP-2.62.exe kwaye isifaki siya kuvela. isebenza kuzo zonke iinguqulelo ze-AIMP (Y)
Siyayamkela le migaqo kwaye kuza kuvela esi sikrini silandelayo, esibonisa indlela ye-winamp ngokungagqibekanga, njengoko siyitshintshela kwindlela ye-IAMP2 "c: Inkqubo yeefayileAimp2Plugins" kwaye sinika oku kulandelayo. Ke ujonge umendo weeplagi ze-AIMP
Ngoku siza kufakelwa, ukuba sineAimp2 evulekileyo, iya kuyivala kuphela.
Emva koko sivula i-AIMP2 kunye nomthunywa kwaye kunjalo.
Kwaye ndicinga ukuba ngento endinayo ayinakwenzeka ukumamela unomathotholo (ngokoluvo lwam) kodwa iseyeyona mdlali mculo ubalaseleyo kum
Ndifunda phaya phandle ukuba bazakubandakanya ukudlalwa kwevidiyo kwi-AIMP kodwa kum kulungile, ukongeza ukuba kwiwebhu ungazifumana iZikhumba, ii icon, kunye neeplagi ukuqonda ezinye iifomathi zesandi ... Ewe nditsho wonke umntu kwaye uqhubeke nokusebenzisa i-AIMP att: Izy dj
Phendula u-Izy dj
Molo, masibone ukuba ukhona na umntu onokundinceda… ndinayo i-aimp2 kwaye ndizama ukufumana apho uhlengahlengiso lwevolumu oluzenzekelayo kukuba onke amanqaku abhekisa kuwo, kodwa andiyifumani.
Ngaba inokuba yinto yolawulo lwevolumu yehlabathi?
Molo, bendikade ndifakela iklasikhi kwi-pc yam, ndiyikhuphile kwaye ndibeka i-aimp2 ngoku ingxaki endinayo kukuba iifayile zomculo ziphelelwe ngumqondiso; Le yeklasikhi ye-aimp ebendinayo ngaphambili ayikho kwaye andazi ukuba ndingayibeka njani i-icon ye-aimp2 kwiifayile zomsindo
I-kingropi kufuneka icofe iqhosha lasekunene le mouse kwifayile yomculo, emva koko ukhethe "ukuvula nge" kwaye apho ikhetha i-aimp kunye namanqaku "soloko usebenzisa le nkqubo". Kulungile?
Ndifuna nje ukwazi ukuba i-msn ibonisa oko ndimameleyo kumdlali we-AIMP ndifuna uncedo olukhawulezileyo
Ndinombuzo malunga ne-imp avers ukuba ungandinceda kwaye ukuba khange babuze ngaphambili, andizifundanga zonke izithuba, kulungile bendifuna ukwazi, ukuba ungamisela ixesha lokuxuba kwingoma ukuya kwingoma, kuba xa umamele ikonsathi okanye nayiphi na i-albhamu erekhodwe bukhoma, iyacaphukisa ukuba imizuzwana emi-5 ngaphambi kokuphela kwengoma itsiba iye kwenye ifayile kwaye zivakala zombini okwexesha elifutshane kwaye andifumananga apho ndingamisela khona enkosi
I-aimp ayizivelisi iingoma njengoko zi-odolwe, iyazikhetha kwaye ndifuna iphinde yenziwe ngokulandelelana njengoko ikuluhlu, ndenza njani?
U-Esteban usebenze i-odolo ngokungacwangciswanga ukuze uyenze ingasebenzi kufuneka ucofe kwiqhosha elinemivalo emithathu etsaliwe (nganye imfutshane kunenye). Ukuba unenguqulo yakudala, inokuba ngathi lutolo oluzijikelayo.
Molo bafana. Ndiyakuvuyela kwiwebhu. Ndifunda ukuba uKingropi wayenengxaki efanayo nam ngee-icon ze-Aimp2, ezenzeka kum nasemva kokwenza into oyithethayo, Vinegar. Kuwo nawuphi na umdlali, esenza into oyithethayo, i icon yeefayile zomsindo iyatshintsha kuleyo uyicwangcisileyo njengemiyo emiselweyo. Ngaphantsi kwi-Aimp2. Ukongeza, kwiscreen se "Associations", ndikhetha zonke iifayile zeaudiyo ezinxulunyaniswa ne-Aimp, ndibethe u "Faka isicelo" kwaye kwangoko ndikhethe enye indlela, ndikhethe "iMibutho" kwakhona kwaye zonke azitshekishwanga kwakhona, yiyo loo nto ndingazange beka i icon efanelekileyo kwiifayile.
Ngaba ukhona omnye umntu onale ngxaki? Ngaba ukhona umntu onazo naziphi na izimvo ezinokuthi zilungiswe njani? Ndiyabulela kakhulu.
Molo mhlobo webhlog, umbuzo wam yile ilandelayo ndinayo
Inguqulelo yokugqibela ye-aimp2classic, kodwa ndizithumele eludaka,
xa ndifuna ukususa ingoma kuluhlu lwadlalwayo ayizange inike
inketho kwaye kuyo yonke into eyitshoyo: cima umxholo kwidiski, yintoni
Imelwe ukuba ivela kwi-PC, kunye nemouse ekunene kwisifundo eso
Umzekelo: Ndifuna ukususa kuluhlu, ayikuniki ukhetho lwe
yisuse kuluhlu kuphela, kodwa xa ndifuna ukuyisusa
Uyisusile kuluhlu kodwa kumatshini wam oko kukuthi, kum
1. -cima iifayile ezikhethiweyo kwidiski
2. -cima zonke
3. -cima ifayile yangoku kwidiski
Ngaba ungandicacisela ukuba ngaba kukho naluphi na ukhetho ngaphakathi kwe-
Izicwangciso zenkqubo ongakhange uzisebenzise? njenge
Olu kuphela konyulo endilubonileyo, xa ndifuna ukucima
isihloko awayesibeke ngempazamo, esathi ekugqibeleni
Ndicime kodwa… ngelishwa kwiPC …… imibuliso., Oh no
yinkqubo ebalaseleyo yokunxibelelana nejet audio, yona
ikwalungile, zombini zezona zilungileyo kunencasa yam!
Kulungile, khuphela i-aimp2 ukuze ukwazi ukurekhoda izandi ezivela kwi-pc (iividiyo, njl.
kodwa xa ndizama ukurekhoda ndifumana iiparameter ezingekhoyo.
Kwaye xa ndiyilungiselela, kwinxalenye yomthombo wokurekhoda andifumani nto, ayinanto, kwaye kuba andinakuyenza into yokuba andinakwenza nto, sele ndiyikhuphele kwiindawo ezahlukeneyo kwaye ngenxa yoko andifumani nto.
Kuya kufuneka ndikhuphele enye into?
okanye ndenza ntoni?
Phendula ku juancho-kun
Molo, uyazi, ndizama ukubonisa umculo wam kwi-aimp2 nge-msn plus! kodwa ayibonisi nto ... ndingayiqwalasela njani ... ??
Mholo!!! Ndifana no-Enrique ... andazi ukuba ndingalibona njani igama lomculo odlalwa yi-Aimp2: Ewe, ukuba umntu uyayazi indlela yokwenza oko kwenzeke, ndicacisele ...
Ngaphambili, ndinombulelo kakhulu! usale kakuhle…
Iviniga: Nceda uphendule uLuis, ndinomdla kumbuzo wakho, malunga nokucinywa kwediski kuluhlu olucinywe kwidiski.
Kwaye undixelele ukuba kukho iiplogi ezithile ezinomdla ze-aimp2.
@luis masibone, ukucima ingoma kuluhlu lwadlalwayo lwe-Aimp 2 ngaphandle kokucima ingoma kwi-PC, kuya kufuneka ucofe ingoma kuluhlu kwaye ucofe iqhosha le-Del (Del). Ungavula imenyu ngokunqakraza ekunene kwingoma ekuluhlu kwaye ukhethe «Cima ukhetho». Awuyi kuyicima ingoma kuphela kuluhlu lwe-Aimp2.
@Enrique noJose abazi ukuba benze njani le nto uyifunayo.
@Thony okwangoku andisebenzisi nayiphi na iplagi ngenxa yoko andinakuncoma nayiphi na 🙂
Ibhlog iphezulu, kodwa ndifuna ukwazi ukuba ndilugcina njani uluhlu lokudlalwayo njenge-m3u hayi nje ngokubhaliweyo ukuze ndingazenzi kwakhona xa ndibuyisela umbulelo we-aimp.
Ndifuna ukwazi indlela yokubeka phezulu iingoma ukuze kungabikho sithuba phakathi kwazo
Enkosi umbulali weviniga ngokuphendula umbuzo wam malunga
Ukucinywa ngengozi komxholo, into elungileyo kuye kwafuneka ndiyifake kwakhona
Kumatshini wam (pc) bekungekho enye, ngoku ndifuna ukukwenzela enye
buza ulinde ukuba ungandikhokela na mhlobo, i
Inyani yile yokuba umbuzo ucacile, kodwa …….
Uyabona, ngabo bonke abadlali endibasebenzisayo kumatshini wam, i
ngaphandle kwe-aimp2, ziimidiya zeendaba kunye nejetaudioplus
ngeewindows media kunye nejetaudio, andinangxaki kwakhona
xa ndiyixelela ukuba yenze "uluhlu lokudlala olutsha",
yenza ngaphandle kwengxaki, vala iifestile okanye uvale
jetaudio, ndiyayivula kwakhona kwaye uluhlu luhlala luvela njenge
kufuneka yenzeke kubo bonke abadlali beaudio, ngaphandle
Nangona kunjalo nge-aimp2, ndikwazile ukwenza uluhlu olunye lwe
Ukuzaliswa kwakhona okugcinwe kwi:
C: Iifayile zeNkqubo AIMP2DatapcPLS
xa ndizama ukwenza olunye uluhlu lokudlala lundinika
Ukukhetha ukuyinika igama elitsha nayo yonke loo nto, kodwa …… ayiniki
ukhetho oluthi "gcina uluhlu", ndilugcinile
ngenketho ethi: ctrl + s
Ndiyayijonga, ndiyibeka kwindlela edlulileyo, ndivale i-aimp2,
xa ndiyivula kwakhona uluhlu lwe
ukuvelisa kwakhona, nceda undixelele ngokuchanekileyo ukuba kanjani
kufuneka yenziwe ukwenza uluhlu lokudlala olutsha
ngaphandle kokucinywa xa kuvalwa i-aimp2 kwaye uyivula
kwakhona?., Enkosi kakhulu kwangaphambili ngexesha lakho kwaye
umonde wokundiphendula ndilinde impendulo yakho!
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingazifaka njani izikhumba ezitsha endizikhupheleyo kwiwebhu, kuba ndizivula kwifolda yezikhumba kwaye azizifaki ngokwazo, yenza njani c?
Molo, ifavour ifaka i-aimp, kwaye kuthiwa yonke into ihambe kakuhle, kodwa andifumani khetho lokuba ndikwazi ukudibanisa iingoma ekugqibeleni, nceda ukuba umntu angandinika isandla, Enkosi !!!
I-Aimp 2 ayidlali kwanto. Isizathu? Ndiyabulela kakhulu.
Molo, ndiyifakile i-AIMP2.51 kwaye akukho ndlela yokurekhoda isandi ngokuchanekileyo, andazi ukuba ndenza into engalunganga, ndifuna ukurekhoda isiqwenga sengoma mp3 esidlalayo. Ndinika isandi seRekhodi, isixhobo sibeka iMakrofoni, igalelo ku: ivolumu ngokubanzi, umgangatho: 11025Hz 8bits stereo. Kwifomathi, encoded: mp3, mode: ABR (JOINT STEREO) kunye ne-kbps: 192
Nceda, ukuba ndenze into engeyiyo undixelele ukuba kutheni ndizophambana apha hahaha! Ndiyabulela kakhulu
Molo u-Augusto, andazi ukuba kunjalo kodwa i-AIMP v2.11 yam iyekile ukudlala kunye nokungena kukhetho (Ctrl + P), isixhobo sokudlala-isixhobo sesandi kufuneka sikwizithethi okanye ezidlulileyo zinjalo hayi kwisandi, jonga ukuba Lityala lakho. salu2
Ndidinga uncedo lwakho nceda…. Faka i-AIMP2.51 buil330. Ukongeza i-URL / iRadiyo, ndongeza umzekelo: »http://www.infinita.cl»…, emva koko, ndidlala ngokucofa kabini kwidilesi kwaye i-AIMP2 iyandiphendula: «ifomathi yefayile engaxhaswanga (ikhowudi: 41)»… Ngaba niyayazi indlela yokulungisa le nto, ukuze ndikwazi ukumamela irediyo ye-intanethi… Enkosi.
Molo, uyazi ukuba ndikhuphele ulusu olunye kwi-aimp 2 yam.
kodwa andazi ukuba ndingazisebenzisa njani ..
Ndinazo kwifolda endiyikhuphelayo kwindawo enye nomdlali ...
Ngaphambili ndiyabulela kakhulu.
Molo ndine-aimp2 kwaye ngumdlali olungileyo, kuphela ndinengxaki, ayirekhodisi isandi kuba isithi ndilahlekile kwiparameter! Ndiyifumana njani ukuba irekhode?
Iyaqondakala kakhulu kwaye yenziwa kwincwadi encinci, ndinombulelo. Njengesiphakamiso, ukuba uyandivumela, khuthazwa ukuba wenze incwadana ye-AIMP2 ... qhubeka!
Andazi ukudibanisa iingoma endizimameleyo ngesiphene, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba yenziwa njani?
Ngaba kukho isifundo kwiSpanish kwi-AIMP?
Molo, ndonwabile kakhulu yinkcazo ngendlela yokongeza izikhululo zikanomathotholo kwi-aimp, enkosi kakhulu
Ndinengxaki, kukuba lonke ixesha ndifuna ukurekhoda ingoma ndisebenzisa i-AIMP CLASSIC, ivala ngokuzenzekelayo kum, ngamanye amaxesha ngexesha lokurekhoda kwaye ngamanye amaxesha ndiyinika irekhodi kwaye iyavala, ndingenza ntoni lungisa loo ngxaki.
Ikhompyuter yam yi-2.3 GHz Intel Core Duo, i-80G hard drive; Inkqubo yokusebenza yewindows XP yohlelo lweWolf.
Ndingaluvuyela uncedo lwakho.
Ndinengxaki kukuba ndizikhuphele izikhumba ze-aimp2 kwaye andazi ukuba ndingazibona njani kwaye ndizibeke kwi-aimp2 yam ukuze ziboniswe, ukuba umntu uyayazi indlela yokwenza oko nceda utsho njalo
ukuba kubaluleke kakhulu ukwazi
iviniga njengoko ndisenza njalo emva kokuba nditshintshe isiqwenga somculo embindini, ongaphambili nalowo ndibeke kuwo ... owandulelayo malunga nemizuzwana emibini ngaphezulu okanye ngaphantsi
Hayi yena sitsho
Mholo!! Inyani yile yokuba le nkqubo intle kakhulu, ndiyintlekele kunye nekhompyuter kwaye emva kokuziqhelanisa nezakudala, bandinike le kwaye ndonwabile.
Ndingadinga uncedo oluncinci, andikwazi ukuhlela iilebheli ngokuchanekileyo. Into endiyifunayo kukuzilungiselela ukuze xa ndithumela umculo kwi-cel ucocekile.
Molo uyazi ukuba ndinombuzo kwinxalenye yomphathi weplagin. Zingaphi iiplagi ezivela? Umbuzo wam ngaba ziyimfuneko zonke ??? Kwaye ukuba ndisusa enye, injongo iya kulayisha ngokukhawuleza?
ukhetho lwevolumu yolawulo lwehlabathi lubonakala luvaliwe, ndingenza njani ukuze ivolumu ingalawulwa yi-aimp .. nceda uncede =)
Molo, ndiyifumana iluncedo kakhulu le blog kwaye ndinomdla, ndinengxaki encinci kwaye ayikhange ikwazi ukumisela ukuxubana kweengoma, oko kukuthi ngelixa elinye ligqiba, elinye lihamba kakuhle, ndiyathemba ungandinceda ngale nto kwaye ndiyabulela kakhulu
UMarcelo andres sitsho
KUKHETHO> IZIPHUMO ZOMSINDO ngaphakathi kukho ukhetho olunamagama afanayo (iziphumo zesandi) apho kukho iibhokisi ezi-3 zokumakisha, leyo kufuneka uyiphawule NGOKUVAKALELA KWEZINDLELA XA UZALELA PHAKATHI KWEEMVAVANYO.
Apha ngezantsi ufumana ezinye iindlela zokumisela ixesha elingaphi kwi-msec. ufuna isandi siphele okanye sibaxube
Ewe ndiyathemba ukuba ndiye ndanceda
Nangona ndingaqinisekanga ukuba ngumba wangoku
Phendula uMarcelo Andres
Molo, bendifuna ukwazi ukuba ingaba le nkqubo iyahambelana neWindows Vista kwaye ukuba inezandi ezingcono kunabanye abadlali. Ndiyathemba ukuba uyaphendula, enkosi kakhulu.
Mhlobo wam, ndilandele amagqabantshintshi ngenyathelo, utsho ukuba kamva uza kwenza ezinye iinkqubo zenkqubo efanayo… .umbuzo… uyayenza okanye awuhambeli ulungiselelo kunye nolunye, unayo incwadana yomdlali wegom? imibuliso nenjana enkulu
Molo kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingazigcina njani iinguqulelo endizenzileyo kumculo.
kodwa apho andazi ukuba leliphi icandelo lekhompyuter eligcina
Phendula u banny
Ndinayo le nkqubo kodwa andinakho ukukhuphela umculo njengoko ndisenza apho kufuneka ndiye khona ukuze ndikwazi ukukhuphela umculo ukuze ndimamele. ???
UFabio Oviedo sitsho
Ngaba umntu ungandinceda ndisebenzise esi sidlali-mculo
Phendula uFabio Oviedo
Molo, okokuqala ndingathanda ukwazi ukuba kutheni ipc yam ingafuni ukukhuphela kwi-aimp, andazi ukuba ndenzeni ndicela undincede, kuba bendinguPekeña kwaye andikakwazi ukuyifumana, ingaba kungenxa yeefestile mfo? Andazi into endiyaziyo k Ndifuna esk ndincede ndicela ingxamiseke ... Bye take care.
Molo !! Ndiqalisile ukusebenzisa le nkqubo kwaye andazi ukuba iingoma zomsindo zigcinwa njani xa sele zilungisiwe
Ndinengxaki, xa ndifaka ngempazamo ndavala ifestile apho kuchazwe ulwimi olukhethiweyo kwaye nge «Foul» yalubeka ngesiRashiya (ndicinga njalo) ngoku andifumani ndlela yokuguqula ulwimi.
Ndiyaluxabisa uncedo lwakho
Kudala ndisebenzisa le nkqubo ngaphandle kwengxaki; kodwa ngequbuliso ibha yomdlali ihlala ibonakala incinci ngaphandle kohlu lwadlalwayo kunye nayo yonke indawo yokudlala. Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
Mholo ; UMBUZO ONGAPHENDULWA NGUBANI: NDINGAWUQALA NJANI I-MELT PHAKATHI KWENGOMA ??????
Umbulali weVineyard Wave:
Ewe ndinopimp2 kwaye ndinengoma ye-wma kwaye ndifuna ukuyenza mp3 kwaye andazi ukuba ndinjani, uyafunda kodwa ndiyathemba ukuba uzakundiphendula kakuhle bye
Molo Vinegar ... ndenza njani ukuba uluhlu lokudlalayo luchukumise xa luchukumisa umda wesikrini kwaye ndilufihle, ndishiya isalathi sentolo ngalo lonke ixesha ndiphumla kuso ngesikhombisi kwaye uluhlu olufihliweyo luvela kwicala lesikrini?
MRc ukudibanisa iingoma oya kuzo kwiwindow yokukhetha okanye ucofe u-ctrl P kwaye ukusuka apho ekhohlo ucofe ekudlaleni emva koko uphawule ukhetho oluthi lusebenzise ukuphela kwaye olulandelayo lusebenzise isandi sokuphela (zombini iziphumo), ikuvumela ukuba ubeke kwixesha lokudanisa phakathi kwesihloko esinye kunye nesinye.
Ndiyathemba ukuba oku kungakunceda.
ngokungathandabuzekiyo umntu uyazi ukuba ndingenza njani ukufumana igama lesifundo endaweni yewebhusayithi kunye nentengiso ye-riper, kwi-winamp yayilukhetho lwe-matadata okanye into enjalo.
Ndine-AIMP 2.61 kunye nokukhetha «iiRadiyo zokuKhangela» ayisabonakali, evule ibhokisi apho ndikhethe khona iiradio zeShoutcast okanye ze-Icecast. Andiyazi into eyenzekileyo, ukuba umntu uyayazi, mxelele, ukuba ndifumene into, ndiza kuyithetha
Hi ndlela leyi, kuseto lweendlela ezimfutshane zebhodi yezitshixo ndibeka indibaniselwano ye-Ctrl + F5 kunye nabanye abaninzi, kodwa xa uzama ukuvula isikhangeli somsakazo ngokudibanisa, akukho nto ibonakala nokuba
UWilliam Delgado sitsho
Inguqulelo 2.6 ayinayo ukhetho lwe-url, kunye nokususa isixhobo esiguquliweyo. Kwelam icala ndihleli nohlobo 2.1 olunazo.
Ndicebisa ukuba abo bakwazileyo ukufumana izikhululo zokumamela nge-AIMP2, bazipapashe kwaye babelane ngazo ngale ndlela. Enkosi!
Phendula kuWilliam Delgado
Inguqulelo 2.6 ukuba unokhetho lokuchukumisa i-URL, kodwa xa ungena kwi-http. mms okanye i-rtmp indiphosa ngeempazamo, ezinje ngefomathi engasekelwanga, 200 ok…. , Andisebenzisi proxy, firewall njl. Kodwa ayisebenzi
Iya kuba yintoni indlela yokufaka iidilesi zerediyo ukuze ndibachukumise?
Ndiyayithanda kuba kulula ukuqhuba ndiyathanda ukushiya
Nceda uphendule kule mpazamo: ikhowudi yefomathi engasetyenziswanga: 41, ibonakala xa uza kudlala umculo ngefomathi ye-wma, sele iphawulwe ngophawu lokujonga kwimibutho ukuze iphinde iveliswe kwaye nangona kunjalo le mpazamo iyaqhubeka ukuvela, kwangaphambili kakhulu Enkosi PANA VINAGRE ngokuphendula zonke iingxaki zethu.
Phendula u-EL PELON
Molweni nonke, ndinengxaki yokungafumani khowudi yefomathi yefayile: 41 kwaye ndiyisombulule ngokuvula i-AIMP2> Yiya kukhetho> Yiya kukhetho lokuqala: Ukudlala> Ngaphantsi kwesixhobo esinesandi, Akukho Sandi savela, bonisa uluhlu kwaye ukhethe isandi sam isixhobo kwaye uthi ukufaka isicelo nokusombulula ingxaki, ndiyathemba ukuba iyakusebenzela.
molo ndineklasikhi ye-aimp kwaye ndibeka uluhlu lwadlalwayo kwaye ndiyaludlala kwaye aludlaleli kum ibar yomculo ayishukumi, akukho nto iphosakeleyo ngevolumu ayizidlali iingoma kwenzeka ntoni?
Molo, lo mdlali ulunge kakhulu, ndifumene ingxaki enye kuphela: ayikuxhasi ukuqala kwamatyeli amaninzi, yeyiphi i-winamp eyenzayo.Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angenza njani ukuba banako? Ngokokubona kwam akunakwenzeka. Enkosi!
I-VALDETE SILVA sitsho
NGABA UMNYE UMNTU UNGAYENZA INKONZO NGAM? SINENGXAKI EFANAYO OKANYE EFANAYO: UKUVULA IIMEKO EZININZI EZINGEZIinjongo, SIHAMBA NJANI?
SINOKUTHUMELA IMPENDULO KWI: valdetesilva@yahoo.com.br
Phendula ku-VALDETE SILVA
Ulwandle nesibhakabhaka sitsho
Ndinengxaki, ndingenza njani ukuba amazwi aphefumlelweyo okanye amazwi aphume kwiingoma?
Kuyavela ukuba ndinoluhlu oluninzi lokudlalwayo olwenziwe nge-winamp, kodwa xa ndizidlala nge-AiMP ayizidlali kuba ngelishwa umculo wam ukwifolda "yomculo" kwaye ithatha into efana no "Mculo", ngendlela efanayo Ungasibona isihloko seengoma, umzekelo ovela ku- «E: MusicOkucelwe kakhuluAlejandra Guzmán - Lumka Ngentliziyo.mp3» kubonisiwe ngoluhlobo: «E: MusicThe most requestedAlejandra Guzm? n - Lumka nentliziyo. mp3 »
Imibuliso kunye nombulelo ngoncedo lwakho
Molo! Kudala ndisebenzisa lo mdlali ngoku kwaye intle kakhulu, ndiyayithanda… kodwa ndikwimeko efanayo noMarcio… .Ndingathanda ukwazi ukuba unaso na isisombululo sokulungisa le nkqubo ukubona ii-aksenti okanye i-«ñ» ... ndigqitha kumhleli wethegi ukubona ukuba ndingasifumana na isisombululo, yinto engaqhelekanga i-xD
Ukuba kukho umntu owaziyo, nceda wabelane ngolwazi ukuba ungayenza njani. Enkosi! ^ ^
kulungile! nasi isisombululo sengxaki d accents =)
2) ulwimi okanye ulwimi
3) Sikhethe ulwimi lweSpanish
4) Kukho ibha eyehlayo ethi "Guqula i-non-unicode isicatshulwa ngokulingana" kwaye sikhethe:
Baqala kwakhona inkqubo yabo emva koko babone umphumo .... Kuyabonakala ukuba iyavela i-xP njengoko ingxaki ihambile… ndiyathemba iyakusebenzela mfana… ngoku yup, ndiza apha xD kunye negalelo elilungileyo malunga neposi ^ ^
cesar dario sitsho
Molo, iinyanga ezi-6 bendisebenzisa lo mdlali ubalaseleyo, ngaphambili bendiyifakile kwi-win xp kwaye ndenza ukuba imenyu yokujonga i-windows yomhloli ukongeza umculo ngelixa umamele. kodwa xa kusenzeka ndiphumelele7 olu khetho alulayishi, ndenze ukuba ibhokisi yemenyu isebenze kukhetho, kodwa ayikasebenzi kumhloli wamazwe.
Phendula kwi-cesar dario
Ndayifaka i-aimp 2, yonke into yahamba kakuhle kodwa ngexesha lokuyifaka ndafumana ipowusta ethi:
AKUKWAZI UKULANDA UMSEBENZI: OPTIMFROG.DLL
Nceda umntu andinike isandla esincinci, ndifuna ukudlala iifayile ngefomathi. * Ye-flv, ngawaphi amanyathelo okuyenza.
Ndiyidibanisa njani ingoma nomnye ukuze kungabikho nqumama phakathi kwezi zimbini ???
okanye kuye wonke umntu. . .
Ndingathanda ukwazi ukuba ndinokubona njani amazwi eengoma zangoku.
Ndiyabulela kwangoko . . .
Ekuphela kwento endiyifunayo zizinto eziluncedo, nanjengoko sinerekhoda
arnulfo ukulinda sitsho
Sawubona umbulali weviniga, andinakungena kwizikhululo zalapha kwi-aimp ndilandele isifundo endisifumene kwi-intanethi kwaye xa ndingena kwikhowudi yemithombo andifumani mkhosi. Enkosi, uyandikhokela kuba ndingumntu othanda unomathotholo.
Phendula kwiarnulfo suares
Molweni, ndibulise, ndingathanda ukwazi ukuba zivulwa njani iifayile zomsindo xa ndigqibezela ukurekhoda ngqo kwizikhululo zikanomathotholo kwi-aimp2, igrax !!!
Ndingathanda ukuhlela uluhlu lokudlala, lwenziwa njani?
UAndre Encalada Palacios sitsho
Ndine-aimp3 kwaye andazi ukuba ndiyisusa njani i-odolo engahleliwe? ' Ndincede 🙁
Phendula u-Andre Encalada Palacios